Inkonzo yabaThengi engalunganga iyenzakalisa i-ROI yakho yokuthengisa | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 9, 2016 NgeCawa, ngoSeptemba 19, 2021 Douglas Karr
Ijiti, iqonga ledesika yoncedo, ivelise le infographic eneenkcukacha ezibonisa ngokucacileyo umfanekiso ifuthe lenkonzo yabathengi engalunganga kwishishini. Iinkampani ziyaqhubeka nokuphatha iinkonzo zabathengi ezihlwempuzekileyo njengoko bezisenza kwiminyaka eyadlulayo… xa abathengi babedla ngokukhalaza kwishishini okanye kwisangqa esincinci sabahlobo. Kodwa ayisiyonyani le hlabathi siphila kulo ngoku.
Abathengi abanomsindo bangababulali abathe cwaka
Inkonzo yabathengi ehlwempuzekileyo yonakalisa igama lophawu lwakho kwi-intanethi kwaye ichaphazela ngokuthe ngqo imbuyekezo yakho yentengiso kutyalo-mali. Ukuba unayo iphepha lemveliso kwi-intanethi eligcwele uphononongo olubi phantsi kwalo, abathengi abanokubakho baya kuhamba. Ngapha koko, i-86% yeendwendwe ayizukuthenga kwinkampani eneempendulo ezimbi.
Ukuphucula inkonzo yakho kubathengi ngokubanzi, iJitBit icebisa ukuba iinkampani ziphucule unxibelelwano phakathi kwabasebenzi beenkonzo kunye nabathengi, zibonelele ngoqeqesho olungcono ukunqanda abasebenzi abangakwaziyo ukusebenza, kunye nokubonelela ngamava afanayo kuwo onke amajelo enkonzo yabathengi- ezibandakanya zombini ifowuni, i-imeyile, ingxoxo ebukhoma, iiforamu , Cofa-umnxeba inkxaso, nkqu kwimidiya yoluntu. Zineenkcukacha Iindlela ezili-11 zeNkonzo yoMthengi engeyiyo iyatshisa iZantsi lakho kwiposti yabo:
Ukungafikeleleki - amashishini kufuneka afikeleleke kwaye aphendule kuwo onke amajelo.
isantya - akukho nto iphazamisa umboleki njengokulinda uncedo.
ulwazi - iiarhente zenkonzo ezingakwaziyo ukunceda zingaphaya kokukhathazeka.
Iingxoxo -Ukuzama ukuphumelela umlo ukutyhala amashishini ukuba aphulukane nemfazwe.
Thembiso Ukophula izithembiso kukwaphula ukuthembana, kwaye isiqingatha sazo zonke iinkampani sizaphula izithembiso.
iirekhodi - ukuphinda umnxeba kunye nokuchaza ingxaki kwakhona lonke ixesha uqhuba abathengi bamandongomane.
zobuqu -Ukungazi ukuba ngubani umthengi wakho, ixabiso labo, ubungcali babo, kunye nolindelo lwabo lushiya iinkampani ngasemva.
Ukuphulaphula -Ukuba kufuneka uyiphindaphinde ingxaki ngokungeyomfuneko kwaye uqhuba amaxabiso oneliseko.
Ukulandela phezulu - xa usithi uza kulandela, landela.
Abasebenzi abakrwada -Nokuba nokuba usuku lubi kangakanani kubasebenzi bakho, akukho sizathu sakukhupha oko kumthengi olandelayo.
Baleka ujikeleze -Ukudluliselwa kunye nokulibaziseka kungekho sisombululo yeyona nto imbi onokuyenza kumthengi.
Umgca we-infographic? Ngo-2020, amava kumakhasimende liya kulifumana ixabiso kunye nemveliso njengoko isitshixo umahluko wophawu. Iimpawu ezininzi sele zikho, ngokoluvo lwam. Amashishini afunda ukuba abathengi abanganelisekanga kunqabile ukuba babuye, uninzi aluzuphindi lusebenzise inkampani kwakhona. Yongeza loo nto kunye nenyaniso yokuba abathengi abangonelisekanga banokwabelana ngokulula ngokudana kwabo kwi-Intanethi, kwaye ishishini lakho lisingise engxakini ukuba awuphenduli kwaye ulungisa iingxaki ezichaziweyo. Iinkampani ezininzi zithatha inkonzo yabathengi njengobubi obuyimfuneko xa kufanelekile ukuba batyale imali kuyo njengomahluko okhuphisana nabo.
tags: Inkonzo embi kubathengiamava kumakhasimendeInkonzo eyenzelweInkonzo yabathengi roiIinkcukacha-manani zeenkonzo zabathengiyenkxasokwi-infographicjitbituphononongo olubiInkonzo yomthengi ephantsiReviewsROI